2 Samoela 21 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (2008)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Karo) Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Galicienne Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kosrae Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Motu Myama Navajo Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Romanina) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Alemà Soisa Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Frantsay Belza Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Israelianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Jamaikanina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Myama Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Nizerianina Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Slovenianina Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Zambianina Tenin’ny Tanana any Singapour Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Ticuna Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Xavante Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
2 Samoela 21:1-22
21 Ary nisy mosary+ tamin’ny andron’i Davida, nandritra ny telo taona nisesy. Dia nanontany an’i Jehovah i Davida, ka hoy i Jehovah: “Meloka ho nandatsa-dra i Saoly sy ny ankohonany, satria novonoiny ho faty ny Gibeonita.”+ 2 Dia nantsoin’ny mpanjaka ny Gibeonita+ ka niresahany. Tsy anisan’ny zanak’Israely ny Gibeonita, fa anisan’ny sisa tavela tamin’ny Amorita.+ Ary efa nianiana tamin’izy ireo ny zanak’Israely,+ nefa nitady handripaka+ azy ireo i Saoly satria nahasaro-piaro+ azy ny zanak’Israely sy ny Joda. 3 Dia hoy i Davida tamin’ny Gibeonita: “Inona no hataoko ho anareo, ary inona no hataoko fandrakofam-pahotana,+ mba hitsofanareo rano ny lovan’i+ Jehovah?” 4 Ary hoy ny Gibeonita: “Tsy volafotsy na volamena+ no takinay amin’i Saoly sy ny ankohonany, sady tsy zonay koa ny mamono olona eto amin’ny Israely.” Dia hoy i Davida: “Izay lazainareo dia hataoko ho anareo.” 5 Koa hoy izy ireo tamin’ny mpanjaka: “Nandringana+ anay sy nitetika+ ny handripaka anay tsy hisy intsony eto amin’ny faritra rehetran’ny Israely iny lehilahy iny. 6 Koa atolory anay ny fito lahy amin’ny taranany.+ Dia hahantonay+ eo anatrehan’i Jehovah ny fatin’izy ireo ao Gibean’i+ Saoly, ilay voafidin’i Jehovah.”+ Ary hoy ny mpanjaka: “Izaho no hanolotra azy ireo.” 7 Nangoraka an’i Mefiboseta+ zanak’i Jonatana zanak’i Saoly anefa ny mpanjaka, noho ny fianianana+ nataon’i Davida sy Jonatana zanak’i Saoly, tamin’ny anaran’i Jehovah. 8 Koa nalain’ny mpanjaka i Armony sy Mefiboseta, zanak’i Rizpa+ zanakavavin’i Aia, dia izy roa lahy naterany tamin’i Saoly. Nalainy koa ny zanak’i Mikala+ zanakavavin’i Saoly, dia izy dimy lahy naterany tamin’i Adriela+ zanak’i Barzilay Meholatita. 9 Ary natolony teo an-tanan’ny Gibeonita ireo, ka nahanton’ny Gibeonita teo an-tendrombohitra, teo anatrehan’i Jehovah, ny fatin’izy ireo.+ Koa niara-maty izy fito. Novonoina ho faty izy ireo teo am-piandohan’ny fijinjana, izany hoe rehefa nanomboka ny fijinjana vary orza.+ 10 Ary naka lamba gony+ i Rizpa zanakavavin’i Aia,+ ka novelariny teo ambony vatolampy. Dia nitoetra teo izy hatramin’ny fanombohan’ny fijinjana ka mandra-pilatsaky ny orana avy any an-danitra teo amin’ireo faty.+ Ary tsy navelany hisy vorona+ hipetraka teo amin’ireo faty nandritra ny andro, na bibidia+ any an-tsaha nandritra ny alina. 11 Farany, dia nisy nilaza+ tamin’i Davida ny zavatra nataon’i Rizpa zanakavavin’i Aia, vadikelin’i Saoly. 12 Koa lasa i Davida naka ny taolambalon’i Saoly+ sy Jonatana zanany, tany amin’ireo tompon-tany tao Jabesi-gileada+ izay nangalatra azy ireo teo amin’ny tany malalak’i Beti-sana.+ Teo no nanantonan’ny Filistinina azy,+ tamin’ilay andro namonoan’ny Filistinina an’i Saoly tany Gilboa.+ 13 Dia nentiny niakatra avy tany ny taolambalon’i Saoly sy Jonatana zanany. Nangonina koa ny taolambalon’ireo lehilahy nahantona.+ 14 Koa nalevina tao amin’ny fasan’i Kisy+ rainy tao Zela+ any amin’ny tanin’i Benjamina, ny taolambalon’i Saoly sy Jonatana zanany, ho fanatanterahana izay rehetra nandidian’ny mpanjaka. Taorian’izay, dia nohenoin’Andriamanitra ny fitalahoana ho an’ilay tany.+ 15 Ary niady tamin’ny Israely indray ny Filistinina.+ Koa nidina niady tamin’ny Filistinina i Davida sy ny mpanompony. Dia reraka i Davida. 16 Ary saika hamely azy i Jisbi-benoba, izay anisan’ny teraky ny Refaima.+ Sekely varahina telonjato* ny lanjan’ny lefony,+ ary nisy sabatra vaovao teo amin’ny fehikibony. 17 Tonga nanampy+ an’i Davida avy hatrany anefa i Abisay+ zanak’i Zeroia, ka namely an’ilay Filistinina, dia namono azy ho faty. Tamin’izay dia nianiana tamin’i Davida ny olony hoe: “Tsy mahazo mivoaka hiady miaraka aminay intsony ianao,+ sao hovonoinao+ ny jiron’ny+ Israely!” 18 Taorian’izay, dia raikitra indray ny ady tamin’ny Filistinina, tany Goba. Ary i Sibekay+ Hosatita+ no nahafaty an’i Safa, izay anisan’ny teraky ny Refaima.+ 19 Ary raikitra indray ny ady tamin’ny Filistinina, tany Goba, ka novonoin’i Elanana+ zanak’i Jare-oregima Betlehemita i Goliata Gatita. Toy ny voditenon’ny mpanenona ny tahon-defon’i Goliata.+ 20 Raikitra indray ny ady tao Gata,+ ary nisy lehilahy iray goavam-be tao. Enina avy ny rantsantanany sy ny rantsantongony, ka efatra amby roapolo ny isan’ny rantsany. Teraky ny Refaima koa izy.+ 21 Ary nihantsy ady+ tamin’ny Israely foana izy, ka novonoin’i Jonatana+ zanak’i Simey+ rahalahin’i Davida. 22 Teraky ny Refaima tany Gata izy efatra ireo,+ ary matin’ny tanan’i Davida sy ny mpanompony.+
^ 3,42 kg eo ho eo.